This study documents the wild elephant population and rich biodiversity in Megatha Forest (also known as Megatha Wildlife Sanctuary),acorner of Karen State that is part of the elephants’ native habitat. The Forest providesagood example of an intact ecosystem, but because 22 of the 60 species living there are at risk, the forest faces significant threats including ongoing war, militarization and accelerating natural resource exploitation.
ဤအစီရင်ခံစာသည် ဆင်ရိုင်းများ၏ နေထိုင်ကျက်စားရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သော မက်ကသသစ်တော (မက်က သဘေးမဲ့တော) အတွင်းရှိဆင်ရိုင်းအရေအတွက်မည်မျှရှိသေးသည်၊ သစ်တောအတွင်း ဇီဝမျိုးကွဲများမည်မျှရှိ သေးသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသုတေသနပြုလုပ်ကာ ထုတ်ဝေဖြန့် ချိသောအစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်မက် ကသသစ်တောအတွင်းရှိ ဇီဝမျိုးစု ၆၀ စု မှ ၂၂ စုသည် ပြည်တွင်းစစ်နှင့် သဘာဝအရင်းအ မြစ်အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူမှုများကြောင့် ဘေးအန္တရယ် နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။